Pilo kely #4503 aroson’i Mamy Be - ewa.mg
Pilo kely #4503 aroson’i Mamy Be
News - Pilo kely #4503 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4503 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Vokatry ny fanamboarana fantsona iray teny amin’ny manodidina no nahatonga ny fahatapahan-drano, teny amin’ny hopitaly Befelatanana omaly sy afak’omaly, saingy efa miverina amin’ny laoniny ny famatsiana. L’article Fahatapahan-drano est apparu en premier sur AoRaha.
Baolina kitra – Filaharana FIFA :: Tafaverina ao anatin’ny Top 100 i Madagasikara
Namoaka ny filaharana vaovao taorian’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika na ny CAN tany Ejypta ny federasiona iraisam-pirenena amin’ny taranja baolina kitra (Fifa) omaly. Nampiova ny filaharana maneran-tany sy eto Afrika ihany koa ny lalao nataon’ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea taorian’iny CAN iny. Nandroso toerana roa ambin’ny folo i Madagasikara noho fifaninanana tsara nataony tany Ejipta, ka eo amin’ny laharana faha-96 manerantany ny Barea raha faha-108 teo aloha. Lasa eo amin’ny laharana faha-21 aty Afrika kosa. Anisan’ny nampiakatra ny laharan’i Madagasikara ny nandresen’ny Barea an’i Burundi tamin’ny isa 1 noho 0 tany amin’ny fifaninam-bondrona nandritra ny CAN. Teo ihany koa ny nandavoan’ny mpilalao malagasy ny Nizeriana tamin’ny isa 2 noho 0 ary ny nanilihantsika an’i RD Congo tamin’ny fandakana penalty teo amin’ny ampahavalon-dalan’ny CAN. Ampahatsiahivina fa ny 14 jona lasa teo no namoaka ny filaharana farany ny Fifa. Nanom- boka ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay kosa ny CAN. Nitondra tantara sy sary tsara ho an’ny baolina kitra malagasy ny Barea tany amin’iny andiany faha 32-n’ny CAN iny. Sendra R. L’article Baolina kitra – Filaharana FIFA :: Tafaverina ao anatin’ny Top 100 i Madagasikara est apparu en premier sur AoRaha.
FAMONOANA PÔLISY TELO LAHY :: Naiditra am-ponja ireo olona sivy ambin’ny folo voampanga
Natolotra ny Fitsarana , omaly any Toamasina ireo olona miisa sivy ambin’ny folo voarohirohy namono nahafaty ireo pôlisy miisa telo, tany Fenoarivo Atsinanana, tamin’ny 24 oktobra lasa teo. Vita ny fihainoana azy ireo tao amin’ny Fampanoavana dia avy hatrany natolotra ny mpitsara mpanao famotorana ireo voampanga rehetra. Naiditra am-ponja avokoa izy ireo taorian’izay. Nifandrombonan’ny zandary sy ny pôlisy misahana ny heloka bevava ny fisamborana sy ny famotorana ireo olona am-polony ireo tany Fenoarivo Atsinanana. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena dia vehivavy no nampirisika ireo andian’olona nitarika tamin’ny famonoana ireo pôlisy telo mirahalahy namita iraka tany an-toerana tamin’io fotoana io. Isan’ireo efa voasambotra ary natolotra ny Fitsarana io vehivavy io. Ankoatra ny fianakavian’ireo pôlisy namoy ny ainy dia nametraka fitoriana tamin’ity raharaha ity ihany koa ny Pôlisim-pirenena. Raha tsy mbola mivaha ny olana momba ny raharaha Antsakabary, izay maha voarohirohy olon-tsotra maro namono nahafaty pôlisy roa sy pôlisy maro voampanga nandoro trano an-jatony, ka namoizana ain’olona iray tany an-toerana dia miseho indray ity raharaha Fenoarivo Atsinanana ity. L’article FAMONOANA PÔLISY TELO LAHY :: Naiditra am-ponja ireo olona sivy ambin’ny folo voampanga est apparu en premier sur AoRaha.
Fampandrosoana: hamondron-kery ny Fizafia
Nampahafantarina nandritra ny « sakandro », ny lanonana fihaonamben’ny mpikambana natao teny Alarobia, ny alahady teo ny hirosoan’ny Fikambanan’ny zanaka Ampanabaka Fitovinany eto Antananarivo ( Fizafia) lalindalina kokoa amin’ny fampandrosoana. “Paikady hiatrehana izany ny famoronana hetsika lehibe ao Vohipeno, hanasongadinana ny kolontsaina sy ny soatoavina Antemoro hoenti-mampandroso iny faritra niavian’ny Ampanabaka iny”, hoy ny filohan’ny fikambanana, i Botomahasendry. Notsiahiviny fa manana olomanga sy manampahaizana azo akan-kevitra amin’ny sehatra samihafa ny Ampanabaka ka ho vovonana hihaonana, handinihana ny sakana amin’ny fampandrosoana sy ny tokony hatao io fotoana io. Etsy andaniny, hatao fisintonana mpitsidika ihany koa izany hetsika izany hisian’ny fidiram-bola ho an’ny mponina sy ny rafitra any an-toerana amin’ny fandraisana azy ireo sy ny fifanakalozana aminy. “Tafiditra ao anatin’izany ny fanamafisana ny fifandraisan’ny samy Ampanabaka, efa miely patrana manerana ny Nosy”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa efa niendrika fampiraisam-pirenena ny « sakandro » nataon’izy ireo teto AntananarivoL’article Fampandrosoana: hamondron-kery ny Fizafia a été récupéré chez Newsmada.
Lomano-Filaharana Afrika: mbola “top 10” i Murielle
Misondrotra avo hatrany ny voninahi-pirenena malagasy, amin’ny alalan’ny taranja lomano. Taorian’ny nahazoany ny laharana faha-7, teto Afrika, ho an’ny 100 m NL, vehivavy, mbola tafiditra “top 10” indray Rabarijaona Tiana Marielle, ho an’ny 400 m NL. Ny fifaninanana “56th Malaysia International Age Group Swimming Championships” ka nahavitany ny hazakazaka tamin’ny fe-potoana 04’35”45 ny nahafahana nametraka ho eo amin’ny laharana faha-10 eto Afrika. Filaharana navoakan’ny Cana (Confederation africaine de natation), omaly, ho an’ny taona 2020. Tsiahivina fa maro ny fifaninanana iraisam-pirenena natrehiny tamin’ny taona 2019, nahazoany “record national” maromaro. Isan’izany ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, teo amin’ny 400 m NL, ny namontsanany ny zava-bita tsara indrindra nasionaly io. Nandray anjara tamin’ilay fifaninanana natao tany Gwangju, Corée, ihany koa i Murielle ka zava-bita tsara indrindra nasionaly roa ny montsany (50 m basse/200 m NL).Raha hiverenana ity filaharana nivoaka ity teo amin’ny 400 m NL, azon’i Dune Coetzee ny laharana voalohany (04’19’’19). Mi.Raz L’article Lomano-Filaharana Afrika: mbola “top 10” i Murielle a été récupéré chez Newsmada.